Fiaraha-miasan'ny Semalta Ny fomba tsara indrindra hanakanana data avy amin'ny tranonkala iray
Octoparse is a useful and powerful data scraping tool. Afaka manatsara sy manosika ny ezaka fampiroboroboana ny angon-drakitra mankany amin'ny ambaratonga manaraka. Ny Octoparse dia tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama - best temperature monitoring. Amin'ny alàlan'ny baikom-pifandraisana maimaim-poana dia azonao atao ny manakatona haingana ny tranonkala dimy arivo.
Octoparse dia manangona sy manakona angona avy amin'ny Internet ary manana mpisera maherin'ny 150.000 eran-tany. Hatramin'ny taona 2014, Octoparse dia manolotra tolotra fanangonam-baovao mahazatra ary manandrana manao fanatsarana any amin'izay ilaina.
Azo ampiasaina amin'ny Internet ny format malalaka. Miaraka amin'ny Octoparse, tsy vitanao ny manaparitaka ny angon-drakitrao fa afaka mandamina tsara azy koa. Ny vaovao azo omena dia mety ho lasa fampahalalana sarobidy, noho ny Octoparse noho ny fanaovana izany. Ny sasany amin'ireo lafiny mampiavaka azy dia voalaza etsy ambany.
1. Tsara ho an'ireo tsy mpandrindra
Octoparse dia mahatonga anao ho mora ny hanaisotra ny angona avy amin'ny aterineto tsy misy famolavolana fandaharana. Ity fitaovana ity dia mety ho an'ireo mpihira tsy maka sy tsy mpandrindra ary manala ny votoatin'ny tranonkala avy amin'ny tranonkala dynamic sy fototra. Ankoatr'izany dia mamela antsika hamonjy ireo angon-drakitra amin'ny endriny madio sy arovana. Miaraka amin'ny Octoparse dia afaka mamadika mora foana ny angona ianao ao amin'ny API mahazatra ary mahazo ny vokatra tianao.
2. Octoparse ho toy ny rahona fanompoana:
Octoparse dia sehatra iray miforona rahona izay manaisotra pejy maro ao anaty ora iray ary mahazo vokatra tadiavinao, mamonjy ny fotoanao sy ny herinao. Tsy mila manahy momba ny fetran'ny fitaovana ianao satria ity fitaovana ity dia tsy mila fikojakojana ary afaka manatanteraka ny asany amin'ny fotoana tsy tapaka.
3. Jereo ny vidin'ny Octoparse:
Ny iray amin'ireo singa tena miavaka amin'ny Octoparse dia ny manampy anao hanara-maso ny vidiny sy hampitaha ny vokatra isan-karazany. Azo ampiasaina amin'ny tranokala tadiavina toy ny Amazonia sy Ebay ary mora azo avy amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia mamerina mamoaka angon-drakitra amin'ny fotoana voafetra miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy ary mamonjy fotoana be.
4. Mitondrà fitarihana:
Amin'ny Octoparse, azonao atao ny mamorona loharano ary manangana ny lisitry ny varotra ao anatin'ny segondra. Tsy mila fahaiza-mampiasa programa ianao satria i Octoparse dia hikapoka haingana be dia be ny data. Hanampy anao hampiroborobo na hamolavola ny marika amin'ny fomba tsara kokoa izany. Miaraka amin'ny Octoparse, afaka manatsara ny paikady momba ny varotra ianao ary afaka mandray fanapahan-kevitra tsara sy faminaniana.
5. Tsara ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra:
Ny mpianatra sy ny mpampianatra dia mila fanazavana marina mba hanamafisana ny fikarohana. Miaraka amin'ny Octoparse, afaka manangona pejy maro araka izay azo atao ianao ary afaka mahazo vaovao avy amin'ny ebooks sy ny gazety mora foana. Hanampy anao hahafantatra ny angon-drakitra manan-danja sy azo havaozina tsy ho ela.
Ny Octoparse no malaza indrindra amin'ny interface-point-and-click interface. Ny teknolojia fianarana maoderina dia mametraka sy mamerina ny angona amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Ilainao fotsiny ny manasongadina ny angona tianao hampiarahina na hampidirina adiresy URL iray ary avelao i Octoparse hanao ny asany. Hahavita ny asa goavana rehetra ao ambadiky ny efijery izy io.
7. Miaraka amin'ny tranonkala rehetra karazana: